(राजनीतिक) बिधार्थी संगठनको सट्टा के त ?
March 10, 2014 change, environment, nepali, thought provokingUjwal
राजनीतिक बिधार्थी संगठनको ठाँउमा ‘कलेज कल्याण परिषद” राखे कसो होला ?
जसमा ‘बिधार्थी, प्रशासक, प्रध्यापक, कर्मचारी, त्यो टोलका प्रतिनिधि अनि भुतपूर्व बिधार्थीका प्रतिनिधि’ एकै ठाँउमा बसी सबैका साझा समस्याका हल गरिने छ।
राजनीतिक संघ-संगठनको सट्टा काम अनुसारको क्लब प्रणाली राखे कसो होला ? उदाहरणको लागि उद्दमशीलता बिकास क्लब, क्रिकेट क्लब, पेशा परामर्श (career counseling) क्लब, वातावरण क्लब आदि खोली बिधार्थीको हितमा लागे कसो होला।
राजनीतिको नाम लिएर बिधार्थीको पठनपाठनमा मद्दत नगरि बिधार्थी अन्यत्रै राजनीतिक दलको कार्यमा लगाउने संगठन खोलेर काम छैन नेपाल । योग्यतामुखी समाज बनाउने हो भने यो चाकडी-गुण्डागर्दी प्रथा त्यागी विवेकशील उपायहरु अपनाउनु बेश होला साथीहरु !
बिकल्प के हुन सक्ला ? तपाईको पनि सुझाब पाँउ न
← Don’t jump into quick conclusion. Lets be humble when judging others. नेपाली टिमले नेताहरुलाई सिकाईरहेका १० नेतृत्वका पाठ →